Abakhiqizi be-Glass Liquor / Jar, abahlinzeki - I-Glass Glass Bottle / Jar Factory
200ml matte omnyama camera ibhodlela lotshwala ingilazi nge-aluminium lid
Amabhodlela egilasi ayi-200ml amabhodlela endabuko asetshenziselwa umuthi nesiraphu yokukhwehlela, kepha manje asesetshenziselwa kakhulu iwhisky namanye amawayini notshwala, amakha namafutha. Ibhodlela le-flask lenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme, futhi uhlaka lwayo lukuhlinzeka ngezindawo eziningi eziyizicaba ezingasetshenziselwa ukufaka ilebula elilula emabhodleleni. Siphinde sinikeze amabhodlela e-aluminium amabhodlela.
I-750mL Antique Green Bordeaux Wine Amabhodlela
Ibhodlela lengilazi eluhlaza okotshani i-750ml emnyama Fuchsia / Bordeaux isitayela semvelo amabhodlela ewayini aluhlaza yizinketho ezivame kakhulu ezinhlotsheni zeBordeaux ezinjengeBordeaux Cabernet Sauvignon neCab Franc.
Indlela esheshayo futhi elula yokubhodlela ubhiya. La mabhodlela we-16.9 oz flip-top ayindlela esheshayo nelula yokubhodlela ubhiya ngaphandle kokufaka! Ama-Brewers afana nokuphatheka nokulawulwa kwengxenye okunikezwe yilawa mabhodlela. Kulula ukuyihlanza futhi iyashesha futhi kulula ukuyisebenzisa. Ibhodlela le-amber elingu-500 mL (16.9 fl oz) ngepulasitiki / ngobumba i-flip cap.
Sinikeza ukupakisha okungokwezifiso!
Ibhodlela lengilazi yobhiya engu-330ml ende
Ibhodlela likabhiya weglasi elingu-330ml lenziwe ngengilazi yekhwalithi ephezulu. Banomklamo wakudala futhi banenzuzo eyengeziwe yokusebenzisa ingilazi ye-amber. Zifaneleke kakhulu kuwo wonke amakhaya akho aphekwe ekhaya, futhi zakha ibhodlela elifanele njengesipho sakho. Uma ufuna amabhodlela ezentengiselwano ezindawo zokuthengisa, amabhodlela kabhiya weglasi azokunikeza isisombululo esonga imali.
Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Glass Bottle Nge Spray Pump,